Waad salaaman tihiin Servo iyo Blink | Laga soo bilaabo Linux
Waad salaaman tahay Servo iyo Blink
Macasalaama labadan astaamo (Gecko iyo Webkit's)
Markii 2 bilood ka hor la hadal hayey taas Opera wuxuu u wareegay Webkit, waxaa la yiri mustaqbalka internetka ayaa khatar ku jiray ansaxinta weyn ee mashiinkan websaydhka ah. Hadda, qof kastaaba wuu la yaaban yahay, laba matoorro cusub ayaa soo baxay: Howlsocodsiinta y bilig bilig.
Dhinaca Servo, waxaa soo saaray Mozilla oo ay weheliso Samsung oo wata luqad cusub oo loo yaqaan miridhku. Miridhku waa luqad ay ugu talagashay Mozilla inay ahaato isku mid, wax ku ool ah, oo ammaan ah (kuma jiraan tilmaamayaasha NULL ama tilmaamayaasha laalaada). Mashiinkan cusub wuxuu marka hore gaari doonaa aaladaha mobilada (Android iyo Firefox OS) iyo waliba mashiinnada leh ARM.
Dhinaca kale, Google waxay go’aansatay inay Webkit dhinac dhigto oo ay sameyso fargeeto la yiraahdo Blink. Fikradiisa: yaree kakanaanta Webkit. Naqshad dhismeed fara badan ayaa loo isticmaali doonaa si tabku u sii wado inuu shaqeeyo markii goob hoos u dhacdo. Opera waxaa lafilayaa inay wax ku biiriso mashruucan (Safari wali waxba ma oran) iyo inay marka hore gaari doonto Chromium.
Marka la gudbayo, labada matoorba way furan yihiin, in kasta oo Blink la horumarin doono inta ka dambeysa albaabbada xiran.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Noticias » Waad salaaman tahay Servo iyo Blink
Waa war wanaagsan, sidaa darteed waa la damaanad qaaday in WebKit uusan lahayn gacan-ku-wareejin ... haa, waxaan u arkaa astaanta Servo suuuper qabow
taasi waa gecko
Oops ^ - ^ ...
Taasi waxay kugu dhacaysaa inaad faallo ka bixiso adigoon aqrin qodobbada, hahaha.
Waxay ka gudbi doontaa hal-ku-xigeen ahaan loo wareejin doonaa gacan-ku-hayn buuxda, ugu yaraan xakamaynta, oo leh Blink. : /
Shaki, qofwalba wuu qadariyaa Webkit sababtoo ah Google ayaa adeegsanaya, laakiin waxaad horey u laheyd fargeeto hada waxaad adeegsan doontaa servo waxaad heli doontaa mid kale oo galaya tartanka ... mudane, dhib malahan ilaa inta qof kastaa u hogaansamayo heerarka W3C iyo haysashada taageero ku filan oo uu ku istaago, Gecko wali aad iyo aad buu saameyn u leeyahay.
Waan isku raacsanahay
Waxay noqon doontaa xaalad isku mid ah maxaa yeelay hubaal Blink wuxuu sii wadi doonaa inuu la jaan qaado sifooyinka gaarka ah ee WebKit, sidaas darteed waxay u egtahay inay sii socoto inay tahay WebKit marwalba oo aysan waxba iska beddelin.
Sida kaliya ee looga guuleysan karo lahaanshaha ayaa noqon doonta haddii aad dhinac iska dhigto guryahaas oo aad kaliya raacdo heerarka, taas oo dabcan aan dhici doonin.
Maxayna yihiin kuwa "guryaha gaarka u ah Webkit"?
Waxaan la yaabanahay haddii dogmaankaas maalmahan uun ka mid yahay kuwa FUDs-ka ah ee tartan gaar ah la abuuray oo dadku ku celceliyo uun sababta oo ah shirkaddaas oo "runta" runta ka sheegta websaydhka ayaa sidaas leh.
Ku jawaab alan
Waxaan ula jeeday horgalaha -webkit iyo ogaanshaha biraawsarka. Blink wali wuu taageeri doonaa horgalahaas waxayna u badan tahay inuu sii wadi doono adeegsiga cabirka AppleWebKit ee Wakiilka isticmaalaha (ama wax u eg "sida AppleWebKit"). Si kale haddii loo dhigo, websaydhyada waxay noqon doonaan wax ka badan WebKit-ka caadiga ah.
Ah laakiin taasi waxay u muuqataa mid ka duwan sidii hore.
Sidoo kale, kahor -webkitku wuxuu caan noqday, aafadu waxay ahayd -moz, laakiin cidna waxba kamay sheegin maxaa yeelay waxay ahayd Mozilla iyo sababta oo ah qof walba dhalanteedku wuxuu ahaa inuu waxyeelleeyo IE.
Horgaleyaashu, in kastoo ay badan yihiin, had iyo jeer waxaa lagu xisaabtamayaa oo keliya -moz iyo -webkit, kan labaadna wuxuu ka socdaa Chrome illaa halkan. Horgaleyaasha -ms iyo -o marar dhif ah ayey websmater tixgeliyaan.
Xaqiiqdiina Microsoft horay ayey u joojisay gelinta horgaleheeda maxaa yeelay waxay joojisay gelinta waxyaabaha tijaabada ah, waxay kaliya saari doontaa heerar, taas oo si xiise leh ugu shaqeysa iyaga inay dhahaan «IE sida had iyo jeer uga dambeysa heerarka maxaa yeelay ma dhigeyso -moz iyo -webkit »
Waxaan ula jeedaa waa in xanta kaliya ee ka dhanka ah Chrome iyo Webkit ay tahay kaliya FUD iyo buun buunin, xaaladaas waligeed wey jirtay, ka hor intii aysan la joogin Mozilla oo keliya weligoodna wax cabasho ah ma jirin.
Siyaasadda ugu habboon waxay noqon doontaa midda ay adeegsato Mircosoft, laakiin dabcan kuwa kale waa inay "dhinac iska dhigaan guryahaas oo ay ku koobnaadaan raacitaanka heerarka, taas oo dabcan aan dhici doonin" (taas oo u muuqata mid fool xun !, Laakiin waxaan u dhigay in ay ka sii muuqatay maxaa yeelay waxaan leeyahay bucshiradani waa buun buunin iyo FUD; wax shaqsi ah ma aha maxaa yeelay ma aha wax aad adigu leedahay, waan ogahay in ay tahay kalimad la moodo oo ay ku sheegaan dhammaan baloogyada oo haddii ay sidaas kuu sheegaan dadku u maleeyaan) .
@alan: ma fahmin aragtidaada. Aaway FUD? Maxay yihiin ereyadaas aad ka hadlayso?
Aan aragno, hal dhinac oo aad saxantahay, horgaleyaashu weligoodba way xumaayeen, qofkasta oo sameeya. Dhibaatada WebKit waxay ahayd mid fudud in saamigeeda suuqa uu aad u kordhay isla markaana horgalaha uu ka adkaaday dadka kale oo dhan, isagoo noqday wax ka mid ah "Internetka Internet Explorer 6". Hal mar, horumariyayaashu waxay iloobeen horgaleyaasha kale waxayna isticmaaleen kaliya -webkit; iyo ka sii xun, waxay adeegsadeen Wakiilka isticmaalaha in la taageero oo kaliya mashiinkaas lagana reebo kuwa kale, waana markaas markii ay sheegashooyinku bilaabmeen.
Tani maahan FUD ama kiis gooni ah, marwalba waxay ku dhacdaa daalacayaasha caanka ah markay saameynayaan taageerada laga tirada badan yahay. Waxay ku dhacday markii hore IE; Xitaa haddii aadan ogaan karin, sidoo kale Firefox, laakiin qiyaas yar maxaa yeelay marna ma ahayn biraawsarka ugu caansan iyo dhaleeceynta loo isticmaali jiray inay ka timaado bulshada Opera. Waan ogahay tan sababtoo ah waxaan ahaa isticmaale adeegsade biraawsarkan dhowr sano waxayna ahayd wax xasaasi ah inaan la kulmo goobo fara badan oo kaliya taageeraya biraawsarka Mozilla, laakiin cabashooyinka waxay ku dhaceen dhego la'aan sababtoo ah waxay ahayd Firefox waana ay fiicnayd
Hada WebKit si fudud uma suuragalin in la iska indho tiro heerka korsashada ee ay gaadhay awgeed. Waxaan mar labaad ku celinayaa ereyadayda, sida kaliya ee looga hortagi karo inay taasi dhacdo waa inaan dhinac iska dhigno waxyaabaha gaarka u ah oo aan ku koobnaano inaad raacdo heerarka, taasna ku dhashay.
Hadda qof kastaa wuu gartay sida horgaleyaasha xun u yihiin, moodadu waxay noqon doontaa in laga tago. Opera, sidii had iyo jeer ahayd, ayaa ugu horreysay. Ilaa intaan ogahay wuxuu ka tagay sanadihiisii ​​ka horeeyay tan iyo markaasna wuxuu u fasirtay CSS3 sida ay tahay. Iyo Blink, Wixii aan ka akhriyey. Wakiilka isticmaalaha la jaan qaadi kara; Marka, sidaan idhi, waxay noqoneysaa sidii wax aan is beddelin, ugu yaraan aan muddo aad u dheer.
Waxaan qarka u saarnaa inaan ka jawaabo sida saxda ah ee aad ku tidhaahdo sadarka saddexaad (i rumee, waxay ahayd ku dhowaad isku mid) runtiina waa in guud ahaan aan ku heshiinno ku dhowaad wax kasta oo aan dhahno, marka laga reebo gunaanadka ma garanayo sababta.
Kaliya waan ka duwanahay sadarkaaga saddexaad, iyo guud ahaan, haa haa FUD maxaa yeelay cabashada oo dhan waxay u egtahay in Webkit uu yahay midka kaliya ee sheekada oo dhan ama xitaa midka kaliya ee hadda; Maaha olole taban oo kaliya laakiin waa la bartilmaameedsanayaa. Xilligan xaadirka ah xaaladda aan caadiga ahayn ee horgalayaasha waa isku mid Webkit iyo Mozilla labadaba, halkii Webkit ay dimuqraadiyeysay wixii markii hore ahaa kaligii talisnimo; laakiin caqli ahaan ololuhu wuxuu u eg yahay sidii Webkit oo keliya iyo dabcan "daalim".
Marka la eego Webkit, xaaladdan looma indha tirayo maaha sababtoo ah suurtagal maaha, laakiin sababta oo ah kuwii hore u aamusnaa maxaa yeelay way ku habboonayd iyaga hadda waxay dhahaan maxaa yeelay waxay ku qanacsan tahay inay tuuraan FUD isla markaana ay soo saaraan shay ra'yi.
"Qeybta ugu weyn ee Chrome iyo Webkit" waa doodo qarsoodi ah oo kaliya si ay ugu muuqato inay macno samaynayso iyo ujeedo la'aan in laga cawdo hadda (oo xitaa waxay noqon kartaa FUD kale "Chrome wuxuu leeyahay awood buuxda oo shabakadda ah" marka Chrome uu yahay 3 ciyaartoy oo keliya kaliya waxay leedahay seddex meelood meel suuqa). Markii ay xantaasi ka bilaabantay Chrome waxay lahayd xitaa qoondo ka yar sidii ay Firefox u heli jirtay oo ay u kici jirtay. Haa, Firefox sidoo kale kootadaas iyo wax kayar oo horey loo soo rogay oo waxay jabisay webka horgaleyaasheeda oo uraya urta, laakiin ujeedku wuxuu yahay qofna ma caban; mana cabanayaan maanta inkasta oo taasi aysan u istaagin mowqifka Firefox sidoo kale; taas cagsigeeda, waxay u dhaqmaan sidii in aysan maanta jirin waligoodna aysan jirin waxayna ku cawdaan oo kaliya Chrome, taas oo cadeynaysa inaysan ahayn ujeedo ujeedadeed laakiin in waxwalba aysan ahayn wax ka badan FUD iyo hadalo horay loo sameeyay markaa dadku ay raacaan iyaga.
Maxaa intaa ka badan oo keli ah oo google helay?
Rekonq ama Midori (web) ma u wareegi doonaan mishiinkan (Blink)?
Jawaab Arthur Shelby
Webkit maahan inuu dhinto Apple runtii wuu sii wadi karaa horumarkiisa.
Akhbaar aad u wanaagsan, marhoreba waxaan ka walwalsanaa kaydka webkit-ka.
Ku jawaab artbgz
hadda waa ay noqoneysaa mid hal-ku-dheg u ah
Waxaan la joogayaa Servo, iguma muuqato caafimaad inay shirkado badan oo ku saleysan Mareykanka sida Google ay u maamusho dhammaan macluumaadka iyo teknoolojiyada.
Mozilla waa xarun caalami ah oo ku taal Mareykanka.
Haddayna sabab u tahay Samsung, waa mid caalami ah oo saldhiggiisu yahay Yankee protectorate ee Koonfurta Kuuriya.
Haddii ay ka timaaddo gacanta Google, waxaan rajeynayaa inay ku dadaalayaan sidii ay u nadiifin lahaayeen mashiinka raadinta, in kasta oo ay jiraan shabakado ku wareegaya in Mozilla iyo Samsung ay iyaguna abuurayaan mid.
Servo waa mozilla iyo Samsung mootada
Akhriso maqaalka plz xD
way sii socon doontaa inay ahaato sidii hore, waxay sii wadi doonaan inay horumariyaan degellada "filaayo" ee loogu talagalay Chrome
"Naqshad dhismeed fara badan ayaa loo isticmaali doonaa si tabku usii wado inuu shaqeeyo markii goob hoos u dhacdo"
Taasina miyaanay ahayn markii horeba faa iidadii uu Chrome / Chrome ka siiyay daalacayaasha kale?
Taasi waa, haddii hal tab i sudho, ma saamaynayso kuwa kale kumbuyuutarkuna si buuxda uma xirmo.
Hadday taasi uun tahay, waxay ku fiicnaan lahaayeen inay la joogaan Webkit.
Ku jawaab cusboonaysiinta91
Miyay naqshad dhismeedyo badan oo duneed badani ka kooban yihiin ka dhigan tahay inay noqon doonto daadinta ilaha kooxdeenna?
Waxaan u arkaa sidaas.
Naqshad dhismeedyo fara badan oo dun ah ayaa ka dhigan in tab walba uu yahay nidaam madax-bannaan. Firefox-ka waxaa ku yaal qaab dhismeed fara badan oo la akhriyay (tab kasta wuxuu ku jiraa isla nidaamka)
Muhiimadu waxay tahay maanta ma jiraan wax codsiyo ah oo leh awooda dhabta ah ee loogu isticmaali karo xarumo fara badan qaab dhab ah, tusaale ahaan tan waa compressors-ka faylalka adeegsada hal xudun ku dhowaad dhammaan ... arag dariiqaas
Qoraalka asalka ah wuxuu ku sheegayaa in webkit-ka uu noqday mid aad u dhib badan
tan tafaariiqda faraha badan lagu qoro waa been aad u weyn.
Waqtiyadii aan isticmaalay Chrome, Chromium iyo SRWare Iron, markaan bog ka soo tuuro tab, kumbuyuutarka oo dhan ayaa hoos u dhacaya waana inaan ku dhammeeyaa pkilling dhammaan biraawsarka
Jean ventura dijo
Yaab kiiskaaga ... Waxaan isticmaalayay Chrome marki uguhoreeyay iminkana Chromium sanado, mana xasuusto markii iigu dambeysay ee waxaad dhahday igu dhacday (laga yaabee 2 sano ka hor), iyo taas, dhowr jeer oo aan tab ku xirnaa.
Jawaab Jean Ventura
Way fiicnaan laheyd haddii aad soo sheegto Bug, waxaa laga yaabaa inay tahay plugin, ma ogi. Laakiin marka hore, waa dhif iyo naadir inaad hoos u dhigto bog, xasiloonida Linux darteed. In kasta oo laga yaabo in isku mid aysan ku dhicin waxyaabo kala duwan.
Ku jawaab sharciga
Uma maleynayo in Blink uu noqon doono mid tayo leh, laakiin wuxuu noqon doonaa mid kali ah sida webkit-ka.
Aynu xusuusano in Google ay ku bixisay Opera adeegsiga webkit, runtu waxay tahay in Google uu yahay ganacsi aad u weyn oo baabi'inaya tartanka,
Waxaan la joogayaa Servo
Bilaabeyaasha, Webkit maahan hanti gooniya.
Ta labaad, ma ogi haddii aad hayso caddeyn in Google ay ku bixisay Opera "inuu isticmaalo Webkit" ama waa uun FUD.
Midda saddexaad, Google miyey ku siineysaa wax xun? maxaa yeelay Google waxay marwalba siin jirtay Mozilla lacagtaasna waxay ka dhigtay Gecko iyo hadda Servo. Mozilla waligeedna waxay ahayd mid aad u taageerta Google, runtiina Firefox wuxuu ahaa aaladdii ugu horreysay ee ay adeegsato Google si ay ugu soo rogto "halbeeggeeda" uguna qaado webka meeshuu doono.
laga soo bilaabo waxa ay umuuqato bilig billowga waxay isu rogi kartaa wax AAN aad ugu fiicneyn horumarinta webka, maxaa yeelay dhammaan howlaha css3 ee tijaabada ah ma lahaan doonaan xej: -blink-box-shadow:
laakiin waa qofka adeegsada ee hawshan ka hawl gelin doona biraawsarka aqbalida css-ga tijaabada ah.
Kaas oo ah mid iska cad oo fudud dhimashada boon-horumarinta webka ee heer bilicsanaad maadaama qof celcelis ahaan isticmaala uusan dhaqaajin doonin shaqooyinkan, sidaa darteed horumariyeyaashu kuma lumin doonaan waqtigooda sameynta bogag cusub maxaa yeelay dadka adeegsada "biraawsarka ugu badan" looma isticmaalo way ku raaxeysan doonaan
Si kale haddii loo dhigo, waxay i siineysaa aragti ah in koritaankan weyn ee bilicsanaanta adduunka ee webka, mashiinka biligleynaya ee google chrome uu ku ridayo gacan-qaadis aad u wanaagsan.
Nidaamkan ma sameyn doonaan oo kaliya Chrome laakiin sidoo kale Mozilla.
Taas oo markaan u arko inay aniga iila muuqato maxaa yeelay uma fiicna horumarinta webka, ama adeegsadayaasha, wax badan oo aad uga yar shabakadda, in waxyaabo tijaabo ah la isticmaalo oo lagu soo rogo iyada oo aan xitaa la helin heerar aan dabcan si buuxda oo sax ah u wada taageeri doonin dhammaan daalacashada ayaa u heellan inay siiso taageero aamin ah heerka.
@alan «... MA fiicna horumarinta websaydhka ...» mmmmm ... kiiska ugu dambeeya bogagga waxaa lagu buuxin doonaa javascrit (JQuery, iwm) si loogu beddelo saamaynta ccs3 ee tijaabada ah. ergo bogagga web gaabiska ah !!!!!
Ma aanan ogeyn mozilla, ma la wadaagi kartaa isha macluumaadka? (haddii aad gacanta ku hayso) si aad u ogaato waxa ay sharraxaad ka bixisay mozilla
Sameynta bogagga leh saameyno ma aha waajib, waxaad ku shaqeyn kartaa waxa jira iyo heerarka. Waxaan xasuustaa in markii CSS3 iyo HTML5 xitaa aysan ka muuqan khariidada (laakiin aad horeyba u dooneysay inaad disho Flash), websaydhada fudud laakiin shaqeynaya ayaa si fiican loo kiciyay waxaana suurtagal ahayd in laga dhigo: shaqeyn, xirfadle, soo jiidasho leh Kuwa "yar ayaa ka badan" ee naqshadeeyayaasha moodada ayaa iyaguna soo galay naqshadda websaydhka sidoo kale.
Xitaa iyada oo saameyn leh, sidoo kale waa suurtagal in lagu sameeyo waxa hadda la heli karo, taas oo ka sarreeysa nacaybka ma garanayo illaa heerka ay dhab ahaantii "ka gaabin" yihiin "habka casriga ah" (taas oo aan aad u fududeyn, way Noocyo waxaan ka sameeyay bog yar (laga yaabee inbadan) asalka gradients iyo Firefox sameynta duubista waxay ahayd wax laga argagaxo inay aad iigu fiicneyd inaan isticmaalo sawirada asalka ah, markaa wey yara fiicnaatay laakiin ma garanayo sida ay hada tahay-iyo daalacayaasha kale farqiga iyadoo la adeegsanayo sawirro horay loo sameeyay iyo cs gradients waxay ahaayeen ku dhowaad lama dareemi karo laakiin yaa xaqiijiya in qaabkii hore uusan ka fiicnaan doonin? -).
Si kastaba ha noqotee, aan u nimaadno ujeedkaaga oo aan dhahno in runti ay lagama maarmaan tahay in la isticmaalo saameyntan, iyo sidoo kale habab cusub ayaa ka sii wanaagsan sidaa darteed waxay noqon doonaan xulashada ugu horreeya ee la doorbido.
Waxay soo baxday inaadan haysan xaalad kafiican, maxaa yeelay maadaama aysan dhamaan daalacayaashu taageerin astaamahan aan caadiga ahayn (iyo kuwa laga yaabo inaysan si sax ah u taageerin) markaa waxaa soo baxday inaad wali sameyn doonto shaqadaas kale ee la jaanqaadka daalacashada kale oo dhig dhammaan qoraaladaas oo leh shaqo nuqul ah; Ilaa aad si ula kac ah uga tagtid mooyee (ciqaabta taageerida heerka) oo aad kaliya taageero siiso biraawsaradaas oo si deg deg ah wax u gelinaya (iyo xoog ku sargooynta).
Sidaa darteed xaaladdu way ka sii liidataa tan aad soo jeedisay, ka dibna waa inaad labada shayba haysataa, oo aanad ahayn "kan xun" oo keliya; in marka aysan aheyn in ay si toos ah u weeraraan webka furan iyo kan caadiga ah.
Ma heli karo Mozilla, laakiin waxaan kaliya arkay iyada oo ku xidhan meel aan ku arkay warkan oo dib loo eegay.
Ma aysan sheegin sabab gaar ah, mana aysan cadeynin wax sabab ah marka laga reebo in (hada) horgaleyaashani ay yihiin waqtiyo xun oo qofna uusan dooneyn inuu u dhawaado.
Magdhow ahaan, halkan waxaa ku yaal xiriiriye macluumaad badan oo kuwa ka soo horjeeda dhaqankan:
PS: Waad ku mahadsan tahay maamulaha sameeyay "sixirka" si uu u saxo qaladkeyga.
taas oo noqon doonta daqiiqadda ugu dhaqsaha badan waxaan u maleynayaa bilig
Ku jawaab grabiel
Aasaasiga Koowaad ee DNS-ka LAN ee Debian 6.0 (III)
Quful terminal oo ilaali waxa aad ku samayn vlock